Sarona seza tsara kalitao
Fiara Foor Mat Manufactory
Mpamatsy boaty fitahirizana fiara
Lolo mainty misy peta-kofehy eo amin'ny fonon'ny seza fiara
Tsihy biby fiompy mitaingina amin'ny fiara
Ny iraka ataonay dia ny hanome kojakoja fiara tsara voafantina marobe amin'ny vidiny mora, mihoatra ny andrasanao. Miezaka hatrany izahay hanome ny mpanjifa ny fifandraisana mahomby sy sariaka indrindra, ny fifampiraharahana milamina ary ny fandefasana haingana.
Ny iraka ataonay dia ny hanome kojakoja fiara tsara voafantina marobe amin'ny vidiny mora, mihoatra ny andrasanao. Miezaka hatrany izahay hanome ny mpanjifa ny fifandraisana mahomby sy sariaka indrindra, ny fifampiraharahana milamina ary ny fandefasana haingana. Manome kojakoja fiara isan-karazany ho an'ny ankamaroan'ny marika sy modely eny an-tsena izahay, toy ny saron-tseza avo lenta sy ny saron'ny fiara, ny fehin-tongotra miaro, ny saron'ny familiana hoditra, sy ny sisa. Ny fiasa sy ny antsipiriany dia misy siny 2 eo anoloana, fonon-dabilio 1 ary saron-doha ondana 5, ary ny tampon'ny fonony dia misy fisokafana Velcro, izay afaka manampy anao hamerina ny ondana mora foana. Ny lamban-databatray dia 52 santimetatra ny halavany. Ny akora dia vita amin'ny lamba mateza, mahazo aina ary breathable avo lenta-mora diovina, azo sasana amin'ny milina ary maina amin'ny rivotra. Ny fampiharana ankapobeny natao handraisana seza nentim-paharazana sy mafana dia mety amin'ny seza rehetra (fiara, kamiao, kamiao ary SUV). Ity rafitra ity dia tsy mifanaraka amin'ny kitapom-baravarankely eo anoloana sy ny fiasan'ny fanasarahana aoriana. Ny fomba fitaingina sy ny endrika sahisahy indrindra. Tena hahasarika ny sain'ny saina ny tsipika matevina. Misy loko maro mifanaraka amin'ny atiny rehetra. Ny lambanay avo lenta dia misy cushion foam 3mm ao ambadika, izay afaka manala ny hafanana ary mitazona anao mangatsiaka sy mahazo aina na dia amin'ny hafanana mafana indrindra aza.
Package dia ahitana: 2 Saron'ny siny eo anoloana, dabilio 1 misaraka aoriana, saron-doha 5.
Fitaovana: Lamba fisaka / Polyester.polyester miaraka amin'ny takelaka misy tsipika famolavolana Tendro fanadiovana: azo sasana amin'ny milina, maina ny rivotra.
Eo anoloana:mifanentana amin'ny sisiny airbag - nosedraina tamin'ny fomba ofisialy - teknika fanjairana manokana ahafahan'ny airbag hifoka rehefa misy fiantraikany. Ny lamosin'ny seza anoloana dia vita amin'ny lamba mateza mivelatra miaraka amin'ny paosy misokatra ho fitehirizana.; Ny fanokafana velcro miafina sy ny tady azo amboarina dia manamora ny fametrahana sy ny fanesorana ary ny fametahana indray.
Misoroka ny tasy-Ireo saron-tseza ireo dia tonga lafatra amin'ny fiaranao vaovao, na dia ho an'ny fiaranao vaovao aza. Ny saron-tsezantsika dia afaka misoroka ny fiparitahana sy ny tasy ao anaty fiara. Fitaovana mifoka rivotra–Mampiasa fitaovana voafantina manokana izahay mba hahazoana * fampiononana lehibe mandritra ny fandehanana andavan'andro. Ny sosona ivelany polyester avo lenta dia manome rivotra tsara kokoa mba hitazonana anao mangatsiaka sy mahazo aina rehefa mitondra fiara. Famolavolana lamaody - ataovy ho vaovao ny fiaranao ary avereno. Ity saron-tseza feno ity dia manana endrika miloko roa miloko marevaka miaraka amin'ny haingo manjaitra, izay mahatonga azy ho mora ny manampy loko amin'ny atiny. Mora apetraka–mety ho * haingana koa ny fampiasam-bola fiaranao vaovao. Apetraho ny saron-tseza aloha sy ny saron-doha araka ny fomba fametrahanay dingana 3 tsotra. Fampiharana ho an'ny rehetra—mety ho an'ny ankamaroan'ny fiara ny famolavolana saron-tsezantsika, anisan'izany ny fiara, kamiao, fiara ary SUV. Azafady mba jereo ny sarin'ny vokatra ho an'ny ohatra amin'ny kojakoja. Mety mila asa fanampiny ny famoronana "tonga lafatra".
teo aloha: Manufactory Sunshade kalitao avo lenta
Manaraka: Mpamatsy boaty fitahirizana fiara
Saron'ny seza aoriana
Sarona seza Jeep
Fiara Fiara Fiara Fiara
Saron'ny seza Neoprene
Saron'ny seza tsy tantera-drano
Manufactory Sunshade kalitao avo lenta
Fiara Fiara Fiara Fiambenana Anti-Mosquito...
Sunshade fiara avo lenta
Fonon'ny seza fiara dimy